Wasiirka Maaliyadda oo markale ku celiyey in lagu qancay fulinta shuruudihii deyn cafinta Soomaaliya – Kalfadhi
Wasiirka Maaliyadda oo markale ku celiyey in lagu qancay fulinta shuruudihii deyn cafinta Soomaaliya
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, ayaa sheegay in hay’adaha ay ka doonayaan in ay Soomaaliya ka cafiyaan deymaha ay ku qanceen shaqadii ay ka qabteen hanaankii ay u mareyn in deyntaas laga dhaafo Soomaaliya.
Shir uu Wasiir Beyle uga qeyb-galayo magaalada Adis Ababa ee caasimadda Itoobiya maalinkii 2-aad, oo looga hadlayo Hanaanka Maaliyadda Soomaaliya, si loo sii wado hawsha deynta looga cafinayo dalka, ayuu Beyle ku sheegay inuu yahay mid lagu dhameystirayo Hanaanka Deynta Cafinta Soomaaliya.
“Waxaa maalinkii 2-aad inoo socda shirka dib-u-eegista Barnaamijka Sadexaad ee Deyn Cafinta Soomaaliya (SMP3) ee aan la leenahay Hay’adda Lacagta Aduunka ee (IMF)” ayuu yiri Wasiir Bayle, sida ay baahisay Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed ee SONNA.
Wasiir Beyle waxa uu sheegay in ay Hay’adda Lacagta Aduunka ku qanacday sida ay Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) uga soo baxday shuruudihii lagu xiray in Soomaaliya looga cafin doono deynta, sida barnaamijka loo yaqaan Barnaamijka Sadexaad ee Deyn Cafinta Soomaaliya (SMP3).
Soomaaliya waxaa lagu leeyahay lacag ku dhaw 5 bilyan oo Doolar. Lacagtaas waxaa intaas gaarsiiyey dul-saar ku kordheyay ilaa markii ay Soomaaliya deynsatay intii u dhaxeysay 1980-kii ilaa1 990-kii, waqtigaas oo ay ahayd 70 milyan oo Doolar, sida uu Dhaqaalyahan Yaxye Caamir u sheegau BBC-da.
Yaxye ayaa sheegay in ay lacagtaas ahayd 1.6 bilyan sanadkii 2011-kii. “In Soomaaliya lacagtaas lagu leeyahay, oo ay ka shaqeyso sidii lagu cafin lahaa, waxaa bilowday” buu yiri “Dowladdii Xasan Sheekh”. Laakiin ilaa iyo hadda oo aan lagu guuleysan in la cafiyo, waxaa ku sii kordhay dul-saarkii ilaa ay soo gaartay 4.6 bilyan oo Doolar sanadkan 2019-ka.
Yaxye ayaa intaas ku daray in waxa ay Soomaaliya fileyso, haddiiba deyn cafintaas lag aqbalo, ay tahay in loo dhaafo 50%, waxaana markaas cabsi kale ah in inta soo harta ay sii kordhi doonto, haddii aan deg deg lagu bixin.
Golaha Shacabka oo maanta ka doodaya Sharciga Shirkadaha Ganacsiga